Zoba kwi-Intanethi kwiimephu zikaGoogle -Geofumadas
Meyi, 2010 Google umhlaba / imephu, GPS / Izixhobo
Khawucinge ukuba sifuna ukuthumela umdwebo wemephu kumthengi ukujonga kwi-intanethi okanye kwi-GPS ye-navigator. Ngokomzekelo, isalathiso esinokuyithengisa, kunye nendlela yokufumana apho kunye neendlela ezihamba ngayo. Omnye umzekelo unokuba yindawo yombono we-MODIS we-satellite ngaloo mini, esiyithembayo ingalayishwa kwiprogram yakho yemephu.
Into elula kukuba ukuyibeka kwiGoogle Earth kwaye uyithumele i-kml egcinwe, kodwa ukuba sifuna ukusebenzisa idatha yangemvelaphi njengeemifanekiso ze-MODIS, i-OSM okanye i-Google Maps yokujonga indawo, ngokuqinisekileyo akunjalo.
Ngenxa yoko, GPS Visualizer Inenkonzo esebenzayo yasimahla ekuvumela ukuba usebenze kwimizobo yomgca wendawo, indlela kunye nohlobo lwendawo. Emva koko ifayile inokugcinwa njenge-kml okanye i-gpx.
Ukuzoba indawo, kuya kufuneka uphawule amanqaku, anokuguqulwa ngokutsala kunye nokuyivala, cofa kwindawo yokuqala. Kwimeko yendlela, cofa kwindawo yokugqibela, ekugqibeleni ukhetho lokufaka igama lomkhondo liyavela.
Kwimvelaphi, kunokwenzeka ukhethe iGoogle Maps, kwiinguqulelo zayo ze-hybrid, umfanekiso wesatellite okanye indawo. Inokufakwa kwakhona:
Vula Imephu yeSitalato
Imihla ngemihla iMODIS
Amazwe anolwazi oluninzi ungabona kwakhona:
I-USGS topo, inerial + G
I-NRCan yenkonzo yaseKhanada.
Kananjalo ecaleni komfanekiso ongasemva unokukhetha ipesenti yokubonisa ngokucacileyo ukuba kwimeko ye-100% iya kubonisa kuphela imephu etyunjiweyo. Eyona ilungileyo GPS Visualizer, ekupheleni kwemigca, ingagcinwa njengefayile ye-kml ukuba iboniswe kwiGoogle Earth okanye i-GPX ukulayisha kwidivaysi yokuhamba ye-GPS.
Ngamanye amaxesha, ukuvalwa okuzivelelayo kunokuphazamisa ukugcina iifayile. Kuxhomekeka kwisikhangeli, kuya kufuneka uvumele ezi popup windows ukuba ziboniswe, kumzekelo ndisebenzisa iGoogle Chrome. Kukwalungele ukubona isixhobo esenza into encinci kodwa kwesi sihloko sinye kwi IZonum.
Post edlulileyo«Ngaphambilini Ukuvavanya iSokkia Isitishi esipheleleyo SET 630RK
Post Next Ukutyelela umgodi we-EntremaresOkulandelayo »